Health Tips Sex Education
Sep 14, 2021 Hope
မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိကောင်းစရာများ မိန်းမတယောက်အတွက် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းလှပနေဖို့ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ တကိုယ်လုံးလှနေအောင် ဝတ်၊ ကျော့နေအောင် ဆင်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ပါပြီတဲ့ . . . မိန်းမကိုယ်ယားယံလာပြီ အတော်ကသိကအောက်
ဦးနှောက်ကို Upgrade လုပ်ကြမယ် !!!
ဦးနှောက်ကို Upgrade လုပ်ကြမယ် !!! အသက်အရွယ်ကြီး လာတာနဲ့ အမျှ လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာတတ်ပါတယ် မေ့တတ်တာမျိုး၊ တခုခုဆို မမှတ်နိုင်တော့တာမျိုး၊ စွဲနေအောင် မှတ်ထားပြီးမှ
Diet and Nutrition Health Tips
Vitamin – C မှ ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
Vitamin – C မှ ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ဗီတာမင်စီတွင် antioxidant ဓာတ်များစွာပါဝင်တာမို့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းများ ဆေးလိပ်ငွေ့များကြောင့် ဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်းကိုလည်း
Dental and Oral Health Health Tips
သွားဖုံးရောင်ခြင်း တစ်ခါတစ်လေမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအပူတွေစုလာတဲ့အခါမှာ သွားဖုံးနာခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်၊၊ ဒါကြောင့် သွားဖုံးနာပြီး ယောင်ယမ်းနေတဲ့အခါမှာ ရေသောက်လည်း သွားဖုံးကို အထိမခံနိုင်တာမျိုး၊ အစပ်စားပြီး သွားဖုံးနာနေတာမျိုးလေးတွေ ကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တာလဲ…?
Child Health Health Tips
မေမေတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေ နို့အန်တာဘာကြောင့်လဲ? နို့အန်တယ် ဆိုတာ ကလေးငယ်လေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။ ရင်သွေးတွေဆိုတာ မိဘတိုင်းရဲ့အသည်းနှလုံးမို့ ကိုယ့်ကလေးလေးက နို့တိုက်တိုင်း အန်နေတယ်ဆို မေမေတို့ စိတ်မှာ